Asa fanompoana matihanina izay atolotray | Popular Jewelry
Eto amin'ny malaza, tsy izahay fotsiny mivarotra firavaka. Manampy ny mpanjifanay izahay hisafidy firavaka firavaka tena tsara mifanaraka amin'ny fomban'izy ireo sy ny tetibolany. Na manome valisoa ny tenanao ianao, mividy fanomezana ho an'io olona manokana io, na mankalaza hetsika / dingana manokana, dia ho afa-po amin'ny fividiananao ianao.
Mitady zavatra tsy manam-paharoa; manokana? Ny firavaka mpanao asa tanana dia afaka manampy anao mamolavola ny firavakao namboarina manokana; ataovy azo tsapain-tanana ireo sombin-nofinao. Ny firavaka vita amin'ny firavaka vita vita manokana dia tena misy dikany - taratry ny fomba fiteninao manokana izany. Misy ohatra vitsivitsy amin'ny sanganasa namboarina natao eto ambany:
Fikirana fametahana Custom ho an'ny isan'andro, fanambadiana na fampakaram-bady
Bibikely volamena (Grills)
anarana PLate, kavina amin'ny anarana, kavina amin'ny anarana, ny haba omena, sns.
Taratasy vita amin'ny landy na fonosana sy ny tenda
Ary na inona na inona hafa azonao eritreretina ... Hamantatra bebe kokoa
Fanamboarana / Famerenana amin'ny laoniny
Afaka manamboatra, mamerinaze, ary avereno amin'ny laoniny ny firavakao. Izahay koa dia afaka manatsara sy mampifanaraka ny endrik'ireo firavakao araka ny itiavanao azy. Ny ohatra amin'ny serivisy omenay dia misy (fa tsy ferana) amin'ireto manaraka ireto:
Electroplating / Dipping (Rhodium, volafotsy ary volamena)
General fanamboarana firavaka
Famadihana / lavenona
Hijery ny fanoloana bateria
Fanodinana & fako
Manana firavaka tsy ilaina ao amin'ny trano manangona vovoka ve ianao? Manome teny nalaina ho an'ny diamondra, volamena ary platinum izahay. Ho an'ny volamenanao dia azonao atao ny mahazo vola na crédit amin'ny magazay, izay azonao amidy amin'ny fividianana vaovao.
Mbola manana fanontaniana hafa ve?
Mifandraisa aminay- hovalinay am-pifaliana izy ireo ary
hamaha ny olana rehetra anananao momba ny momba anay
vokatra sy serivisy.
7 andro isan-kerinandro, 365 andro isan-taona
New York City dia tsy matory mihitsy, ka toy izany koa izahay =)